Cheap compost inggwakọta igwe n'ihi na anụ ụlọ ịnyịnya nri compost Turner
Obosara Oru: 2000mm
Herụ Ọrụ Elu: 800mm
Arụ ọrụ ikike: 430m³ / awa
TAGRM'Compost inggwakọta igwe nwere ike na-akpaghị aka mezue uzo, bido, mix, azọpịa na oxygenate composting ihe dị ka anụ ụlọ na ulo ozuzu okuko, na ịgba usoro nwere ike tinye mmiri na ferment na composting ihe. Taa,TAGRM 's E tinyegola igwe ịtụgharị Compost n'ụzọ gara nke ọma na mba karịrị 100 dịka Russia, Brazil, Ecuador, Malaysia, Kuwait, Jordan, Argentina, Indonesia, wdg, na anụ ụlọ ha na ọkụkọ nsị nsị na-eji ngwa ọrụ eji arụ ọrụ.
.Dị M2000 Idozi ala 130mm H2
Ike ọnụego 24.05KW （33PS） Nrụgide nke ala 0.46Kg / cm²
Ọnụego ọsọ 2200r / nkeji Obosara na-arụ ọrụ 2000mm W1
Oriri mmanụ ≤235g / KW · h Ọrụ dị elu 800mm Max.
Batrị 24V 2 × 12V Ikpo udi Triangle 45 Celsius
Ike mmanu 40L Gaanụ ọsọ L: 0-8m / nkeji H: 0-40m / nkeji
Nzọ ụkwụ ụkwụ 2350mm W2 N'azụ ọsọ L: 0-8m / nkeji H: 0-40m / nkeji
Ntọala ụkwụ ụkwụ 1400mm L1 Na-atụgharị okirikiri 2450mm Nkeji
Ojuju 2600 × 2140 × 2600mm W3 × L2 × H1 Dayameta nke ala 580mm Jiri mma
Ibu ibu 1500kg Enweghị mmanụ Ike ịrụ ọrụ 430m³ / awa Max.
M2000 Compost Turner enweghị ụlọ
M2000 Compost Turner na ụlọ
Enwere ike ibunye 2 nke M2000 na-atụgharị compost na 20 HQ. Isi akụkụ nke compost igwe ga-juru n'ọnụ ke ịgba ọtọ, ndị fọdụrụ akụkụ ga-juru n'ọnụ na igbe ma ọ bụ plastic echebe. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla pụrụ iche chọrọ maka mbukota, anyị ga-abịa dị ka arịrịọ gị.